ဂျပန်ကတ်ကြေး၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ရောင်းချမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
နောက်ဆုံး 14 ဇန်နဝါရီလ 2021 အပေါ် updated
Nippon ညှပ် Pty, Ltd ACN 641 863 578
အဆိုပါအဒမ်ကတ်ကြေး Trust မှ ABN 68 501 252 754 များအတွက်ဂေါပကအဖြစ်သရုပ်ဆောင်
ဤဝေါဟာရများအရဂျပန်ကတ်ကြေးကို“ ငါတို့”၊ “ ငါတို့” သို့မဟုတ်“ ငါတို့” ဟူ၍လည်း ရည်ညွှန်းသည်။
ဤဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသောအခါဤစည်းကမ်းချက်များသည်အကျုံးဝင်သည် https://www.japanscissors.com.au/ ကျွန်ုပ်တို့တူညီသောဒိုမိန်းအမည်နှင့်အခြားတိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်နေသည့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ (Website).
သင်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သည့်အခါဤသတ်မှတ်ချက်များသည်လည်းအကျုံးဝင်သည်။ထုတ်ကုန်များ).
အပိုင်းတစ် - သင် ၀ ယ်သည့်အခါအတွက်သတ်မှတ်ချက်များကုန်ပစ္စည်းများ (သင် ၀ ယ်သည့်အခါသက်ဆိုင်ပါသည်)
အပိုင်း B: ဤဝဘ်ဆိုက်ကိုသင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအတွက်သတ်မှတ်ချက်များ (သင်ကြည့်ရှုသောအခါတွင်သက်ဆိုင်ပါသည်)
အပိုင်း C: တာဝန်ယူမှုနှင့်အာမခံချက်များ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ (၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းများတွင်ပါအကျုံးဝင်သည်)
သင့်တွင်ဤဝေါဟာရများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင်ဤဝေါဟာရများကိုဖတ်ပြီးသဘောတူခြင်းမရှိပါကဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆက်လက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ခြင်းမပြုရ။
သင်မှာယူပြီးသည်နှင့်ရောင်းချသည့်အချိန်၌လက်ခံသောစည်းကမ်းချက်များသည်ထိုကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော် ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝေါဟာရများ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုအချိန်မရွေးဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဤစာမျက်နှာကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤဝေါဟာရများကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးမည်သည့်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြောင်းလဲကြောင်းကြည့်ရှုရန်ဤစာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးရှိရက်စွဲကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Japan Scissors သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးပရီမီယံထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူပါက၊
(က) (General Information) ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုယေဘုယျအချက်အလက်များအနေဖြင့်သာသင်အားပေးသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်သည်သင်၏တိကျသောအခြေအနေများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျမဟုတ်ပါ။
(ခ) (အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကွိုတငျကာကှယျမှုမြားကုန်ပစ္စည်းများကိုအချိန်နှင့်အမျှလုံခြုံစွာနှင့်သင့်လျော်စွာအသုံးပြုသင့်သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုသောအခါသတိထားသင့်ပြီးထုတ်ကုန်များကိုကလေးများမသုံးသင့်ပါ။
(ဂ) (တရားမဝင်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောအသုံးပြုမှု) ကုန်ပစ္စည်းများကိုတရားမဝင်၊ မသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မသုံးသင့်ပါ။
ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူသောအခါ
(က) ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူရန်အမှာစာတင်ခြင်းအားဖြင့် (အမိန့်) သင်ကကိုယ်စားပြုတယ်၊
(ဈ) သင်၌တရားဝင်စွမ်းရည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်လုံလောက်သောအသက်အရွယ်ရှိသည်။ နှင့်
(ခ) မှာကြားလွှာကိုတင်သွင်းခြင်းသည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပါ ၀ င်ရန်သင့်စာရင်းနှင့်ဤစည်းကမ်းချက်များ၏အပိုင်း A (သင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သဘောတူခဲ့သောအပိုင်း C အပါအ ၀ င်) တွင်ပါ ၀ င်ရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးထိုတွင်ဖော်ပြထားသောစုစုပေါင်းပမာဏအားသင်၏ငွေပေးချေမှုအတွက်လဲလှယ်ရန်သင်သင်မှာယူခဲ့သည့်ထုတ်ကုန်များကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်သို့။
(ဂ) သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်၏အမှာစာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ဤစည်းကမ်းချက်များ၏အပိုင်း A ကိုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားသဘောမတူပါ။
(က) (ဖော်ပြချက်) ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်သင်အမှာစာမကြေငြာမီသင့်အားစာဖြင့်ရေးသားထားသည့်အတိုင်းပေးအပ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်တူညီမှုရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းမည်။ အရောင်နှင့်တောက်ပမှုနှင့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးတို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိပုံနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီကြောင်းသတိပြုပါ။
(ခ) (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) သင်သည်သင်၏အမိန့်နှင့်စာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းမရှိပါကဂျပန်ကတ်ကြေးသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အာမခံချက်မရှိကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
(ဈ) ထုတ်ကုန်နှင့်အတူလုပ်သောပစ္စည်း (ဥပမာ, အထူးသဖြင့်သံမဏိအမျိုးအစား); ဒါမှမဟုတ်
(ဂ) (အရွယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်ဖော်ပြထားသောအရွယ်အစားများသည်ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောတူသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမ ၀ ယ်မီသင့်အတွက်မှန်ကန်သောအရွယ်အစားကို ၀ ယ်ယူနေကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအရွယ်အစားကိုစစ်ဆေးရမည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောအရွယ်အစားသည်မတူညီသောထုတ်ကုန်များအတွက်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရွယ်အစားကိုမစစ်ဆေးဘဲလဲလှယ်လိုပါကသင်သည်သက်ဆိုင်သောရေကြောင်းပို့ဆောင်ခအတွက်တာဝန်ယူနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။
(ဃ) (အန္တရာယ်နှင့်ခေါင်းစဉ်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းကိုအပြည့်အဝမပေးဆောင်မှီအထိ၊ ထိုထုတ်ကုန်များမှခေါင်းစဉ်ကို Japan Scissors မှသိမ်းထားသည်။ ထုတ်ကုန်များမှစွန့်စားမှုများသည်သင့်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ ပေးပို့ခြင်းကိုသင်မှငြင်းဆန်။ မရပါ
(က) စျေးနှုန်းအားလုံးမှာ -
(ဈ) တစ်ယူနစ် (ညွှန်ပြသည့်နေရာမှအပ)
(ii) သြစတြေးလျဒေါ်လာ, နှင့်
(ခ) (ငွေပေးချေမှုရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားစာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းမရှိပါကကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုသင်အမှာစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်ပမာဏနှင့်သင်မှာယူသည့်အချိန်တွင်ပေးရမည်။အဖိုးအခမ်ား).
(ဂ) (GSTအခြားအရာများမှညွှန်ပြထားခြင်းမရှိပါက ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောပမာဏများတွင် GST မရှိပါ။ ဂျပန်ကတ်ကြေးမှပေးဆောင်ရသည့်ပေးငွေအတွက်ပေးဆောင်ရမည့်မည်သည့် GST နှင့်မဆို GST ဘာသာရပ်အားဂျပန်ကတ်ကြေးအားပေးဆောင်ရမည်။
(ဃ) (ကဒ်ဝန်ဆောင်ခ) ကျွန်ုပ်တို့သည် Visa, MasterCard သို့မဟုတ် American Express အပါအ ၀ င်ငွေပေးချေမှုကိုအကြွေး၊ ဒက်ဘစ် (သို့) အားသွင်းကဒ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ကအကြွေး ၀ ယ်ကဒ်ထပ်ဆောင်းကောက်ခံခွင့်ရှိသည်။
(င) (အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုမိတ်ဖက်) ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီငွေပေးချေသူများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ငွေပေးချေမှုပေးသူကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေရန်။ ငွေပေးချေမှုပေးသူမှငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများကိုဤသတ်မှတ်ချက်များအပြင်ငွေပေးချေမှုပေးသူ၏စည်းကမ်းချက်များ၊ အခြေအနေများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးချေသူပေးသူ၏လုံခြုံရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တာဝန်မရှိပါ။ သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုကောက်ယူရာတွင်အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မှပြုပြင်ရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေသူပေးသူအားအမှားပြင်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်ရှိသည်။
(စ) (စျေးနှုန်းအမှားများ) သင်၏အမှာစာကို ၀ ယ်ယူသောစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ (အမှားအယွင်းများ (သို့) မတိကျသော) ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပါက (သင်ပို့ဆောင်စျေးနှုန်းများအပါအ ၀ င်) ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့် ဆက်သွယ်၍ ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အမှာစာကိုမှန်ကန်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ယူခြင်း (သို့) သင်၏အမှာစာကိုပယ်ဖျက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏အမှာစာနှင့်ငွေပေးချေမှုကိုပယ်ဖျက်ရန်ရွေးချယ်ပါကငွေပမာဏအပြည့်အစုံကိုသင်၏မူလငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသို့ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
(က) (Delivery ကုန်ကျစရိတ်ကုန်ပစ္စည်းတွင်ပြသည့်စျေးနှုန်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပါ ၀ င်သည်။
(ခ) (Delivery အသေးစိတ်) ဂျပန်ကတ်ကြေးများသည်သင့်ကိုအချိန်မရွေးငွေပေးချေနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကထိုသို့ပြုလုပ်ဖူးခြင်းမရှိသော်လည်း) ။ စျေးနှုန်းများကိုပါ ၀ င်မှုအနေဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
(ဈ) ပေးပို့ခြင်းကိုဂျပန်ကတ်ကြေးကအထူးလက်ခံထားသောပေးပို့သည့်နေရာသို့ရောက်သည်။ နှင့်
(ii) ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အညီကုန်ပစ္စည်းများကိုသင့်ထံသို့ကျွန်ုပ်တို့ပို့ဆောင်ပေးမည်။
(ဂ) (Delivery ကိစ္စများ) တတိယပါတီ၏စာပို့ခြင်းစည်းကမ်းချက်များသည်သင့်အား Order သို့ပို့ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ပေးပို့မှုနှင့်အတူမည်သည့်ပြနာကိုပြeshနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားသင့်ပါတယ်။ သင်၏ပေးပို့မှုသေချာစေရန်သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါမည်။ သင့်ထံပို့ပေးသည့်အချိန်အားလုံးသည်ခန့်မှန်းချက်များသာဖြစ်ပြီးစာတိုက်တွင်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်သောအကြောင်းရင်းများရှိသည်။ သင်၏အမိန့်ကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းသို့ပေးပို့လိမ့်မည်ဟုမည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုမျှကျွန်ုပ်တို့အာမခံချက်မပြုပါ။ နောက်ကျသောကုန်ပစ္စည်းများကြောင့်သို့မဟုတ်ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
(ဃ) (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှာစာများ) Japan Scissors သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမိန့်များကိုငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ခွင့်ပြုထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှာစာများသည်အကောက်ခွန်နှင့်သွင်းကုန်ခွန်များဖြစ်သည်။ အကောက်ခွန်နှင့်သွင်းကုန်အခွန်အကောက်များအားလုံးပေးချေရန်သင့်တွင်တာဝန်ရှိပြီးငွေပေးချေရန်ပျက်ကွက်ပါကသင်၏အမှာစာမှာအကောက်ခွန်ဌာန၌ထားရှိနိုင်သည်ဟုဝန်ခံလိမ့်မည်။ သင်ပေးဆောင်ရမည့်အကောက်ခွန်နှင့်သွင်းကုန်ခွန်များအပါအ ၀ င်သင်၏အမိန့်ကိုအကောက်ခွန်မှလွှတ်ပေးခြင်းအတွက်သင့်တွင်ကျခံရမည့်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်တာဝန်မရှိပါ။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုသင်၏အမှာစာအားဖျက်သိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့မှခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းကိုသင့်အားအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုငွေပမာဏနှင့်အပြီးသတ်ပြီးပါကငွေပမာဏအပြည့်အစုံကိုသင်၏မူလငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသို့ပြန်ပေးရမည်။
သင်၏အမှာစာကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပြီးသည့်အချိန်အထိသင်သည်သင်၏အမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်၏အမှာစာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်၏အမှာစာသည်စည်းနှောင်မှုရှိပြီးသင့်အား ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်အမ်းငွေများနှင့်ဝါကျများအပြန်အလှန်လဲလှယ်သည် 5.3 - 5.6 လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်ပါကသို့မဟုတ်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပြproblemsနာများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ hello@japanscissors.com.au.
(က) အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါကသင်၏ပေးပို့ပြီးနောက် ၇ ရက်အတွင်းစိတ်ပြောင်းလဲမှုကိုသာကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
(iii) ကုန်ပစ္စည်းကိုသင့်ထံသို့ပေးပို့သည့် နေ့မှစ၍ ၇ ရက်အတွင်းသင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ကုန်ပို့ရက်စွဲ), သင်ကုန်ပစ္စည်းပြန်လာချင်ပါတယ်နှင့်သင်ပြန်အမ်းငွေ, စတိုးဆိုင်အကြွေးသို့မဟုတ်လဲလှယ်ချင်ပါတယ်ရှိမရှိညွှန်ပြ။
(v) ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် Return Address သို့ပို့လိမ့်မည်။
(Vi) လက်ခံရရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းကို၎င်း၏မူလအခြေအနေနှင့်မူရင်းထုပ်ပိုးမှုရှိမရှိသေချာစေရန် (ကျွန်ုပ်တို့၏အကြွင်းမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း) စစ်ဆေးပါမည်။မူလအခြေအနေ).
(VII) အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းသည်မူလအခြေအနေတွင်မပါရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုတွင် -
စိတ်ပြောင်းခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုမကမ်းပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းကိုသိမ်းထားပါလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏အမှတ်သို့ပြန်ပို့ပါလိမ့်မည်minaTed လိပ်စာ (သင့်ကုန်ကျငွေဖြင့်)၊ ဒါမှမဟုတ်
စိတ် ၀ င်စားမှုအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းပါ၊ (အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းပြန်လာချိန်တွင်သန့်ရှင်းမှုမရှိပါက) ၃၀% ပြန်လည်စုဆောင်းခြင်းအခကြေးငွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာသတ်မှတ်ထားသောပမာဏဖြင့်သန့်ရှင်းရေးအခကြေးငွေကိုလျှော့ချပါ။
(VIII) အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းသည်မူလအခြေအနေနှင့်ဤဝါကျ၏စည်းကမ်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည် 5.4 (က) အားလုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ, ထို့နောက်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ် ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ အကြွေးချေးခြင်းသို့မဟုတ်ငွေလဲလှယ်ခြင်း (သင်၏ရွေးချယ်မှုအရ) အနုတ် ၁၀% re- စတော့ရှယ်ယာအခကြေးငွေ။ အကယ်၍ သင်သည်ငွေပြန်အမ်းငွေရရန်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရန်ချေးငွေရရှိရန်သင်ရွေးချယ်ပါကသင်၏ပြန်လည်စုဆောင်းခြင်းအခကြေးငွေကိုဤငွေပမာဏမှနှုတ်ယူလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ငွေလဲလှယ်ရန်သင်ရွေးချယ်ပါက -
သင်လဲလှယ်ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏တန်ဖိုးပေါ် မူတည်၍ ပြန်လည်အရောင်းအ ၀ ယ်အခကြေးငွေကိုထပ်မံကောက်ခံရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ နှင့်
(ခ) ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်နေ့ရက်မှအပြီး ၇ ရက်အကြာမှကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုလုပ်ပါ။
(က) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုဆုံးဖြတ်ပါကကုန်ပစ္စည်းအတွက်ပေးဆောင်ရမည့်အခကြေးငွေများကိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းပေးမည်။
(ii) သင့်အားထောက်ပံ့ပေးသောကုန်ပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်မှာထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်လုံးဝမတူပါ (မျက်နှာပြင်ဖော်ပြခြင်း၊ အရောင်နှင့်တောက်ပမှုနှင့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးတို့ကြောင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်); ဒါမှမဟုတ်
(iii) ထုတ်ကုန်အပိုဒ်နှင့်အညီပျက်ယွင်းနေသည် 5.6 ။
(ခ) သငျသညျအပိုဒ်၏ပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုလိုက်နာလျှင် ၅.၆ ကုန်ပစ္စည်းအတွက်ကုန်ကျငွေကို (ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ်မပါ) ပြန်အမ်းငွေကိုသင်မူလငွေပေးချေမှုပုံစံသို့ပြန်ပို့ပါမည်။
(က) သင်၏ကုန်ပစ္စည်းမကောင်းကြောင်းသင်ယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ hello@japanscissors.com.au (ပုံများအပါအဝင်) အမှား၏အပြည့်အဝဖော်ပြချက်နှင့်အတူ။
(ခ) သင်၏ကုန်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူတင်ပို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုအတွက်သင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လည်ပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှားဟုမယူမီထပ်မံစစ်ဆေးခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) ကျွန်ုပ်တို့၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအမြင်တွင်ကုန်ပစ္စည်းသည်မှားယွင်းကြောင်းသို့မဟုတ်မျှတစွာဝတ်ဆင်ခြင်း၊ မျက်ရည်ယိုခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုရန်ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့) ဓာတုပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအပါအ ၀ င်သင့်လျော်သောဂရုစိုက်မှုပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါက မသင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဓါးသို့မဟုတ်တင်းမာမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပြန်ပို့ခြင်းကိုငြင်းဆန်ပြီးကုန်ပစ္စည်းကိုသင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်သင်ထံသို့ပြန်ပို့ပါမည်။
(ဃ) အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းသည်မှားယွင်းနေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကသင့်ကို (ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ်အပါအ ၀ င်) အပြည့်ပေးချေပြီးသင်ပြန်အမ်းငွေ၊ လဲလှယ်သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုအကြွေးတောင်းခံနိုင်သည်။ ငွေပြန်အမ်းခြင်းအားလုံးသည်သင်၏မူလငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသင်ပြန်လည်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်မှမဟုတ်ပါကအခြားတောင်းဆိုမှုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပါလိမ့်မည်။
(င) ဤအပိုဒ်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုသင်လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက 5.6 ကုန်ပစ္စည်းပျက်ယွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြွင်းမဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်အမှားထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်အမ်းငွေမပေးပါ။
(စ) ဒီအပိုဒ်တွင်အဘယ်အရာကိုမျှ 5.6 သင်ခွင့်ပြုနိုင်သောမည်သည့်ထုတ်လုပ်သူများ၏အာမခံချက်ကိုမဆိုသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရန်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရဖယ်ထုတ်။ မရနိုင်သောသင်၏အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကိုထိခိုက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
(က) Japan Scissors သည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဒီဇိုင်းတွင်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့မဟုတ်ပါကတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းအပါအ ၀ င်သို့မဟုတ်ထိုအခွင့်အရေးများကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုကူးယူရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်၊ ထုတ်လုပ်ရန် (သို့) စီးပွားဖြစ်ရောင်းချရန်မကြိုးစားရပါ။
(ခ) ဒီစည်းကမ်းချက်များ၌ "ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကုမ္ပဏီနှင့်ဒိုမိန်းအမည်များ၊ လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများနှင့်ဤအခွင့်အရေးကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုဆိုလိုသည်။ ဒီဝေါဟာရများကိုသြစတြေးလျနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသည်။
(က) ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့မှတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်သည် -
(ဈ) သင်၏ထုတ်ကုန်များပေးပို့ခြင်းအပါအ ၀ င်ကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုဆောင်ရွက်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို outsource; ဒါမှမဟုတ်
(ခ) သက်ဆိုင်သောဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်သင်၏အမိန့်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုနှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးစေခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်းစသည်တို့အပါအ ၀ င်အခြားတတိယပါတီများ၏လုပ်ရပ်များ၊ ချန်လှပ်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာ ၀ န်မရှိပါ။
(ခ) လျှော့စျေးကုဒ်များကိုသင်သဘောတူသည် -
(ဈ) တစ် ဦး အမိန့်မှနောက်ကြောင်းပြန်လျှောက်ထားမည်မဟုတ်ပါ;
(iii) ငွေသားသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်အကြွေးများအတွက်ရွေးနှုတ်တော်မူမဟုတ်; နှင့်
9 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ & သုံးသပ်ချက်များ
(က) ကုန်ပစ္စည်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်သင့်အားအခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည် (rating) နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပေးချက်ပေးလိမ့်မည် (ဆန်းစစ်ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အပါအဝင်) ။
(ခ) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်သင်မှန်ကန်သော၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမှန်ကန်စွာထင်ဟပ်ပြသရန်လိုအပ်သည်။
(ဂ) သင်ဝယ်ယူထားသောကုန်ပစ္စည်းအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသာ ပေး၍ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုရေးနိုင်လိမ့်မည်။ သင့်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ၏ကိုယ်စားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်အားခွင့်မပြုပါ။
10 ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ Access နှင့်အသုံးပြုမှု
သင်သည်ဤဝေါဟာရများနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများနှင့်အညီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသာအသုံးပြုရမည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများ၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၊
(က) Japan Scissors ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲမိတ္တူကူးခြင်း၊ ထင်ဟပ်ခြင်း၊ ပြန်ထုတ်ခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း၊ ကွဲပြားခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊
(ခ) ကုန်ပစ္စည်းများကိုလှော်လှန်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဝယ်ခြင်းစသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအပြင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊
(ဃ) ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုလက်ခံသောဆာဗာများသို့မဟုတ်ကွန်ယက်များအပေါ်တွင်အလွန်အမင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊
(င) မည်သည့်အလိုအလျောက် scripting tool သို့မဟုတ် software မှမဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပါ။
(စ) အခြား ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်ရှိဝဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဂျပန်ကတ်ကြေးများ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုလျော့နည်းစေခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုးဆိုးရွားရွားသက်ရောက်စေသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ နှင့်
(ဆ) ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုံခြုံရေးကိုချိုးဖောက်ရန်ကြိုးပမ်းပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအားဖြင့် -
(ii) လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊
(iii) ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဗိုင်းရပ်စ်များကိုတင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ စာပို့ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
(ဃ) ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းအားငြင်းပယ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်ခြင်း။
(က) သင်သည်အကောင့်တစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်အကောင့်) ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့်။
(ခ) သင်သည်အကောင့်တစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါရိုးသား။ တိကျမှန်ကန်သော၊ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်ပြည့်စုံသောအချက်အလက်များကိုပေးရန်သဘောတူသည်။
(ဂ) သင်သာတာ ၀ န်ရှိသည်ဟုသင်သဘောတူသည် -
(ဈ) သင်၏အကောင့်အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နှင့်
(ii) သင်၏အကောင့်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုမဆိုဤလှုပ်ရှားမှုများသည်သင်မှခွင့်ပြုထားခြင်းရှိ၊ မရှိ။
(က) ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များသည်တတ်နိုင်သမျှနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ (ဥပဒေမှအများဆုံးခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိ) ကျွန်ုပ်တို့ကအာမခံချက်မရှိကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
(ဈ) ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အမှားအယွင်းများမှကင်းလွတ်လိမ့်မည်။
(ii) ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်သည်။
(iii) ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ပေးပို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုချက်ချင်းပေးပို့လိမ့်မည်၊
(ဃ) ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့်သင်ရရှိသောသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေသောသတင်းအချက်အလက်သည်လုံခြုံမှုရှိရမည်။ နှင့်
(ခ) ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းများနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာများအပါအ ၀ င် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသိပေးခြင်းမရှိဘဲအချိန်မရွေးအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
(က) Japan Scissors သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပစ္စည်းများအားလုံး (ထုတ်ကုန်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဒီဇိုင်း၊ အိုင်ကွန်များ၊ အခြားရုပ်ပုံများ၊ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ စျေးနှုန်း၊ ဒေါင်းလုပ်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအပါအ ၀ င်) ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာ) နှင့်သင့်အားအတိအလင်းခွင့်မပြုထားသည့်၎င်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရထားသောမည်သည့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုမဆိုအခွင့်အရေးများထားရှိမည်။
(ခ) ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုယာယီအီလက်ထရောနစ်မိတ္တူတစ်ခု ပြုလုပ်၍ ကြည့်ရှုရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပါအကြောင်းအရာများကိုဂျပန်ကတ်ကြေးမှကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲသို့မဟုတ်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းထပ်မံကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
(က) ၀ ယ်ယူသူကတတိယပါတီ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအားအသိအမှတ်ပြုသည်။တတိယပါတီသတ်မှတ်ချက်များလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(ဈ) Shopify ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုဤနေရာတွင်ရနိုင်သည်။ https://www.shopify.com/legal/terms
(ii) PayPal ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုဤနေရာတွင်ရနိုင်သည်။ https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_AU
(iii) Afterpay ၏စည်းကမ်းချက်များကိုဤနေရာတွင်ရနိုင်သည်။ https://www.afterpay.com/en-AU/terms-of-service
(ဃ) ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင် Zip ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ: https://zip.co/page/terms-and-conditions
(ခ) ဖောက်သည်သည်သဘောတူသည် ဘေးလူ မည်သည့်တတိယပါတီ၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုသက်ဆိုင်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဂျပန်ကတ်ကြေးများသည်ဤတတိယပါတီစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီဖောက်သည်ကြောင့်ခံစားရသောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
16 အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ Links များ
(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်မဟုတ်သောအခြား ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိနိုင်သည်။ မည်သည့်ချိတ်ဆက်ထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ၎င်းအကြောင်းအရာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ။
(ခ) ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မဆိုပါဝင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်ကိုမဆိုလိုပါ။
17 တတိယပါတီ HOSTING
(က) ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကတစ် ဦး က powered ဖြစ်ပါတယ် ဘေးလူ ပလက်ဖောင်း (ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်၊ Shopify) နှင့် Shopify ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများသည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိသင့်ကိုအသုံးပြုသည်။
(ခ) သက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့် Shopify နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောတူညီမှုအရခွင့်ပြုထားသောအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်အမိန့်များချမှတ်ရာ၌ကြုံတွေ့ရသောပြissuesနာများအပါအ ၀ င် Shopify ၏လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာ ၀ န်မရှိပါ။
ဂျပန်ကတ်ကြေးသည်ကွန်ပျူတာစနစ်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူခြင်းမရှိပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုရန်သင်အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်အားဗိုင်းရပ်စ်များ၊ အန္တရာယ်ရှိသည့်ကွန်ပျူတာကုဒ်များသို့မဟုတ်အခြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်ကိုသေချာစေရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သင့်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းတွင်အခက်အခဲများရှိပါက ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကိုသင်သတိပြုမိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်များသို့မဟုတ်ပုံစံကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
(က) သက်ဆိုင်သောဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသောအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိဂျပန်ကတ်ကြေးသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်ယူမှုအားလုံးကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်စာချုပ်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပေါ့ဆမှုအပါအ ၀ င်၊ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆို၊ ဤဝေါဟာရများသို့မဟုတ်ဂျပန်ကတ်ကြေးများမှပေးသောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(ဈ) သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပထမအကြိမ်အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီ ၁၂ လအတွင်းသင်ကဂျပန်ကတ်ကြေးအားသင်ပေးသောစုစုပေါင်းအခကြေးငွေများ၊ နှင့်
(ii) AUD $ 100 ။
(ဂ) Japan Scissors မှရောင်းချသောကုန်ပစ္စည်းများသည်ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောမည်သည့်အာမခံချက်ကိုမဆိုသင့်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များနှင့်ဂျပန်ကတ်ကြေးများလုပ်ဆောင်သောဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အခြားဖော်ပြသောသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အာမခံချက်များအားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသောအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိဖယ်ထုတ်ထားသည်။
(ဃ) ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ၀ င်သောသြစတြေးလျစားသုံးသူဥပဒေ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုကန့်သတ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်စားသုံးသူအက်ဥပဒေ ၂၀၁၀ (cth) (ACL) ။ ACL အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများပျက်ကွက်ပါကသင် (ပြန်လည်ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်း) ကဲ့သို့သောကုစားနည်းအချို့ကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။
(င) (လျော်ကြေးသင်သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်စားလှယ်များမှပေါ်ပေါက်လာသောလူတစ် ဦး ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက်ဂျပန်ကတ်ကြေးနှင့်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အေးဂျင့်များအားသင်လျော်ကြေးငွေပေးသည်။
(ii) ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်
(iii) ဂျပန်ကတ်ကြေးကပေးသောကုန်ပစ္စည်းများ (၀ န်ဆောင်မှုအပါအ ၀ င်) ကိုအသုံးပြုခြင်း။
(စ) (အကျိုးဆက်ဆုံးရှုံးမှုဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိဂျပန်ကတ်ကြေးသည်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်၊ အထူးသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ သို့မဟုတ်အချက်အလက်၊ စီးပွားရေးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း၊ ချစ်ကြည်ရေး၊ မျှော်မှန်းထားသောငွေစုဆောင်းမှု၊ သို့မဟုတ်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်၍ ဤဝေါဟာရများသို့မဟုတ်ဂျပန်ကတ်ကြေးများမှပေးသောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်စားသုံးသူအက်ဥပဒေ ၂၀၁၀ (Cth) ။
(က) ပါတီလားထိခိုက်နစ်နာပါတီ) အင်အားစုများအနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ဖြစ်စေ၊ ဤစည်းကမ်းချက်များအရ (ငွေပေးချေရန်တာ ၀ န် မှလွဲ၍) ကန့်သတ်ချက်မရှိသောကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခံရသူသည်အခြားပါတီသို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားစာပေးပို့ရမည်။
(ဈ) ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိသော Force Majeure ပွဲ၊ နှင့်
(ii) လူသိများသည်မှာထိခိုက်နစ်နာရသောအဖွဲ့သည်ယင်း၏တာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရန်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးမည်ကိုဖြစ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်သည်။
(ခ) အပိုဒ်နှင့်အတူလိုက်နာမှုမှဘာသာရပ် 21 (က) အင်အားကြီး Majeure အဖြစ်အပျက်ကာလအတွင်းသက်ဆိုင်သည့်တာ ၀ န်ကို Force Majeure Event ၏သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာအထိဆိုင်းငံ့လိမ့်မည်။
(ဂ) ထိရောက်သောပါတီသည်အင်အားကြီး Majeure အဖြစ်အပျက်ကိုအမြန်ဆုံးကျော်လွှားရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုများကိုအသုံးပြုရမည်။
(ဃ) ဤဝေါဟာရများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ 'force majeure event' ဆိုသည်မှာ - \_ t
(ဈ) ဘုရားသခင့်အပြုအမူ၊ လျှပ်စစ်ပြတ်ခြင်း၊ ဥက္ကာခဲမှု၊ မြေငလျင်၊ မုန်တိုင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊
(iii) စစ်ပွဲ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ တော်လှန်ရေး၊ အဓိကရုဏ်း၊ သောင်းကျန်းမှု၊ လူထုအခြေပြုလှုပ်ရှားမှု၊ ကပ်ရောဂါ၊ ဒါမှမဟုတ်
(ဃ) COVID-19 နှင့်စပ်လျဉ်းသောအစိုးရအာဏာပိုင်တစ် ဦး ၏ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့) ထိခိုက်နစ်နာခံရသည့်ပါတီ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်သော COVID-19 ၏ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုခုသည်သက်ရောက်မှုရှိသူ၏ပါတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်သက်ရောက်သည့်အတိုင်းအတာအထိ။
(က) ဤစည်းကမ်းချက်များအရပါတီတစ်ခုသို့အသိပေးချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားဆက်သွယ်မှုတစ်ခုသည် -
(ဈ) အရေးအသားနှင့်အင်္ဂလိပ်လို; နှင့်
(ii) (ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်တွင်) အခြားပါတီထံသို့အီးမေးလ်မှတဆင့်ပို့သည် hello@japanscissors.com.au နှင့် (သင်၏အမှု၌) သင်၏အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်သောအီးမေးလ်လိပ်စာ, ဒါမှမဟုတ်သင်၌အကောင့်မရှိလျှင်, သင်၏အမိန့်နှင့်ဆက်စပ်အီးမေးလ်လိပ်စာ (အီးမေးလိပ်စာ) ။ ပါတီများကသူတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအခြားပါတီသို့အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့်အသစ်ပြောင်းနိုင်သည်။
(ဈ) အီးမေးလ်ကိုပေးပို့ပြီးနောက် 24 နာရီ; ဒါမှမဟုတ်
ဤသဘောတူညီချက်အားAustraliaစတြေးလျနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတွင်ကျင့်သုံးသောဥပဒေဖြင့်အုပ်ချုပ်သည် ပါတီတစ်ခုစီသည်အနောက်သြစတြေးလျ၊ သြစတြေးလျားတရားရုံးများ၏စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောတရားစွဲဆိုမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အယူခံတရားရုံးများ၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်တင်ပြသည်။ ပါတီတစ်ခုစီသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆင်မပြေသောဖိုရမ်တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်လာခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ မည်သည့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်ငြင်းဆိုခြင်းကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
23.2 စွန့် ဦး
ဤစည်းကမ်းချက်များပါ ၀ င်သောမည်သူ့ကိုမျှအခြားပါတီ၏စကားသို့မဟုတ်အပြုအမူအားမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်အားမမှီနိုင်ပါ။
နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောလူနှစ် ဦး ၏တာ ၀ န်ခံမှုသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ယူမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး အားအပ်နှင်းထားသောအခွင့်အရေးတစ်ခုသည်၎င်းတို့အားအတူတကွနှင့်အပြန်အလှန်ခွန်အားဖြစ်စေသည်။
ပါတီတစ်ခုသည်အခြားပါတီ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ၊ ဤစည်းကမ်းချက်များအရ၎င်း၏အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊
ဤသဘောတူစာချုပ်သည်ပါတီများအကြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှု၊ အပြုအမူ၊ အစီအစဉ်၊ နားလည်မှုသို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်၊
(က) (အင်္ဂလိပ်အများကိန်းများ) အနည်းကိန်းအတွက်စကားလုံးအများကိန်း (နှင့်အပြန်အလှန်) ပါဝင်သည်;
(ဂ) (ကျား, မကျား၊ မကိုရည်ညွှန်းသည့်စကားလုံးသည်အခြားကျား၊ မ၏သက်ဆိုင်ရာစကားများပါ ၀ င်သည်။
(ဃ) (သတ်မှတ်ထားသောဝေါဟာရများအကယ်၍ စကားလုံးတစ်လုံး (သို့) စကားစုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်စုံတစ်ရာပေးထားပါကအခြားမည်သည့်မိန့်ခွန်းသို့မဟုတ်သဒ္ဒါပုံစံနှင့်မဆိုထိုစကားလုံး (သို့) စကားစုသည်သက်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
(င) (လူလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏အိမ်ခြံမြေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၊ အခွင့်အာဏာတစ်ခု၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု၊ လုပ်ငန်းစုတစ်ခုသို့မဟုတ်စုပေါင်းဖက်စပ် (ဖက်စပ်သို့မဟုတ်မပါဝင်သည်ဖြစ်စေ)၊ မိတ်ဖက်တစ် ဦး၊ ယုံကြည်မှုနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။ ;
(စ) (ပါတီ) ပါတီတစ်ခုသို့ရည်ညွှန်းသည်ပါတီ၏အမှုဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်သူများ၊ ဆက်ခံသူများနှင့်ခွင့်ပြုထားသောတာ ၀ န်များ၊ အသစ်ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ယူဆောင်လာသောလူများအပါအဝင်၊ ဂေါပကအဖြစ်အပျက်တွင်အစားထိုးထားသောသို့မဟုတ်ထပ်ဆောင်းယုံကြည်သူပါ ၀ င်သည်။
(ဆ) (ဒီဝေါဟာရများအပိုဒ်၊ အပိုဒ်၊ အချိန်ဇယား၊ ပြသမှု၊ ပူးတွဲမှုသို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲကိုရည်ညွှန်းသည်ပါတီတစ်ခု၊ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်၊ အချိန်ဇယား၊ ပြပွဲ၊ ပူးတွဲသို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲကိုဤဝေါဟာရများသို့ရည်ညွှန်းသည်။ အချိန်ဇယား၊ ပြပွဲများ၊ ပူးတွဲဖိုင်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊
(ဇ) (စာရွက်စာတမ်း) (ဤဝေါဟာရများအပါအဝင်) စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုရည်ညွှန်းသည်ဤစာရွက်စာတမ်းကိုမတူညီသော၊ အသစ်တင်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်အခါအားလျော်စွာအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
(ဈ) (ခေါင်းစဉ်) ခေါင်းစဉ်များနှင့်စာလုံးအကြီးဖြင့်ရေးသားထားသောစာလုံးများသည်အဆင်ပြေရန်သာဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုအပေါ်မသက်ရောက်ပါ။
(ည) (ပါဝင်သည်) "ပါဝင်သည်" ဟူသောစကားလုံးနှင့်မည်သည့်ပုံစံအတွက်အလားတူစကားများကန့်သတ်မယ့်စကားလုံးသည်မဟုတ်, နှင့်
(ဋ) (ဆိုးရွားသောအနက်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုပြဌာန်းချက်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်တာ ၀ န်ရှိခြင်းကြောင့်ဤစည်းကမ်းချက်များကိုပြto္ဌာန်းထားခြင်းအားပါတီတစ်ခုအားအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမည်မဟုတ်ပါ။